चुनावी प्रचारका क्रममा झडपका घटना बढ्दै, दुइ दिनर्मा तीन ठाउमा आक्रमण – Enayanepal.com
चुनावी प्रचारका क्रममा झडपका घटना बढ्दै, दुइ दिनर्मा तीन ठाउमा आक्रमण
सुर्खेत, बैशाख । निर्वाचन आउन क िरब हप्ता दिन बा ँक ी रहँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा झडपका घटनाहरु हुन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रचार–प्रसारको कामलाई तीब्रता दिएपछि आक्रमणका घटना घटेका हुन् । प्रचार आक्रामक हँुदै गईरहेको र आमने–सामने प्रचार हुन थालेपछि कार्यकर्ताहरु झडपमा उत्रने गरेका छन् ।
शुक्रबा र सा ँझ न ेकपा माओवादी केन्द्र वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले वडा नम्बर १२ को वडा कार्यालयमा आफ्ना उ म्मेद्वा र झ ंकराज काफ्लेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको जनाएको छ । माओवादीले विज्ञप्तीमार्फत् घटनाको विरोधसमेत गर्दै आक्रमणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार काफ्लेमाथि रुख चिन्ह भएको टिसर्ट लगाएर आएका एमालेका भिजिलान्तेले शुक्रबार साँझ साढे ६ बजे गरेको, आक्रमण पराजित मानसिकताको उपज भएको शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । माओवादी वीरेन्द्रनगरका अध्यक्ष दानसिं विकले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा सरकारसँग आक्रणकारीमाथि कारवाहीको माग गर्दै यस्तो घटना दोहोरिए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
यता, यही घटनाका विषयमा एमाले, सुर्खेतले विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर आफ्ना पूर्व जिल्ला कमिटीका सदस्य तोरण विक कुटिएको दावी गरेको छ । एमाले अध्यक्ष धु्रब शाहीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा शुक्रबार साँझ स्थानीय तह निर्वाचन चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा वीरेन्द्रनगर–११ मा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुबाट भएको सांघातिक आक्रमणमा विक परेको भन्दै आक्रमणप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्तै, चुनावी अभियानमा सक्रिय माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता भिरबाट लडेर घाईते भएपछि उनलाई उद्धार गर्न हिँडेको गाडीमाथि पूर्वमा आक्रमण भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सहारे–४, पातीहाल्नामा एमाले कार्यकर्ताहरुले गाडीमाथि तोडफोड गरेको माओवादी गुर्भाकोटले जनाएको छ । त्यस्तै, चालकमाथि पनि हातपात गरेको जनाईएको छ । शनिबार साँझ ६ बजेतिर विनाकारण एमालेका कार्यकर्ताहरुले गाडीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका हुन् ।
यता, गुर्भाकोट नगरपालिका वडा न म्बर–१, क ाल्चेमा ए माले कार्यकर्ताहरुले माओवादी समर्थक तुलसिंह विकलाई हातपात गरेको माओवादी गुर्भाकोटले जनाएको छ । आफ्नो घरमा बसिरहेका उनलाई विना कारण एमाले कार्यकर्ताहरुले ‘‘किन माओवादी भईस् ? किन चुनाव प्रचारमा हिँडिस्’’ भन्दै कुटपिट गरेको विकलाई उदृत गर्दै त्यहाँबाट खिम पाण्डेले जानकारी दिए । जिल्लामा पछिल्ला दिन भईरहेका यस्ता घटना रोक्नका लागि प्रहरीले विशेष योजनाका साथ लागिरहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख मोहन आचार्यले कुन ै पनि हालतमा निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा गराउन आफूहरु रातदिन लागिरहेको बताए ।
उनले निर्वाचनका दिन र निर्वाचनअघि हुने सम्भावित घटनालाई रोक्न सबैतिर प्रहरी सक्रियरुपमा परिचालन भईरहेको बताए । पछिल्ला दिनमा भएका विभिन्न कुटपिट र झडपका घटनाका बारेमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने एसपी आचार्यको भनाइ छ । आचार्यले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि विशेष सतर्कता अपनाईएको बताए ।